Uba kanjani enhle? Uba kanjani ezikhangayo?
Kuhle kakhulu! Futhi yini ubuhle? Yini-ke aqukethe? ubani
Yiqiniso, impendulo elula akukho. Cishe, ubuhle kanye elikhangayo we chungechunge sizoxoxa ngezinto eziningi. Ngokwesibonelo, sikwazi ukukhuluma ubuhle ngaphandle (sibalo, ikhono bagqoke, makeup, izinwele umbala, uhlobo ukuma ubuso, amehlo, imilenze, izingalo, esifubeni, njll) kanye yangaphakathi (umlingisi, imikhuba, ukuziphatha, isimo, isimo sengqondo ekuphileni njll).
Uma kuvela zonke lezi nemingcele ukuba 5+ unga
azibiza enhle futhi kukhanga!
Futhi uma ubheka lesi simo ngaphesheya? Ngaphandle kwalokho kakho intombazane kungakhathaliseki ukuthi mihle wayengeyena izici ezingenhla ngeke ukwazi ukubiza wena Queen?
The Queen uhlale kuhle uyaziqhenya ukuthutha wasebukhosini. Zonke ekamu wakhe uthi isikhundla salo futhi ukuthi ubuhlobo ukuze ngokwayo emfanele. Kukhona isisho esithi, "Barin nezimbadada kungabonwa", nabo bebekhona lapha kanye Queen ungakwazi ngisho ngezinye izikhathi kube ake ngaphandle ukwakheka noma begqoke ngendlela lelula. Khona kanye ukubukeka kwawo uyonika wonke umuntu azi ukuthi ubani ophethe lapha, futhi ezikhanga kakhulu.
Kumukhi ukunakwa? Ngubani ebonakalayo kakhulu futhi ngempumelelo? Ubani ofuna nobani
Ngaso leso sikhathi, owazi ukubaluleka kwakhe! Nge ekhethekile igazi blue! Nalokhu
Lady! Futhi lokho intokazi enhle ngaphandle ukuma ngomusa lomuntu bobukhosi?
Ngeshwa, kule nkathi ye ukwakheka kanye yezitolo, abesifazane abaningi bavame ukukhohlwa ukubheka yena esibukweni kuthabathela ecaleni noma kuthabathela ecaleni. Wonke umuntu angabona ubuso bakhe amahle izingubo amahle. Nokho, akekho nginibuka bezihambela. High Heels ukushintsha indlela yokushayela, uzazi iyiphi intombazane. Futhi incike kule nokuma komzimba wethu, okuyinto evame okungaka ukuthi ohlangothini kubonakala sengathi kukhona yini intombazane enhle , futhi uphawu lombuzo! Lokhu kubi!
Ikakhulukazi kulabo namanje baqonde ukuthi nobuhle is hhayi nje wenze-up kanye izingubo! Kodwa into ngaphezulu! Ubani baqonde ukuthi ebhishi uyobheka kuphela ngaphandle izimonyo futhi tinsel! Kuyinto labo girls abafuna aphathwe njengomuntu indlovukazi futhi lady, inkambo ehlukile inthanethi lakhiwe, ezidlulayo ezazingase unga nge 100% ngokuqiniseka athi, "Mina - Queen! Enginakho ukuthutha wasebukhosini! ".
Uma ngempela ufuna ukuthatha inkambo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ungakwenza mahhala usebenzisa sipho esiyingqayizivele. Into esemqoka ukuba ngibe nesikhathi ukubhala ungitshele, yini igama lakho ukuthi ufuna babe Queen. Uzothunyelelwa indlela ukuqeqeshwa, okuyinto ilula kakhulu futhi super kahle.
Ukuze eziningi ezimangalisayo, kodwa ukuzibandakanya usuku lonke kuyomelwe nje ... a esiphezulu 3-4 emaminithi !!! Awunayo ukuya noma kuphi, kunoma iyiphi umsebenzi, ezemidlalo. AmaHholo noma kwenye indawo, awudingi ukuba ku-intanethi, awudingi a Skype noma i-imeyili, awudingi ukuzivoxavoxa akhathazayo, noma olunye uhlobo yokuhlushwa. Okudingayo ukuba babe nesifiso esinamandla sokuthuthukisa muhle nakakhulu kunawe manje, ngomusa futhi kukhanga.
Uma ufunde lokhu kude, siyakuhalalisela. Isifiso sakho namandla! Manje uyazi ukuthi ukuba babe enhle, nendlela abe ezikhangayo futhi babe nesifiso esinamandla ukuze siphumelele kule ndaba! Nge lesi sifiso, wena kalula uthuthele izintaba, yebo, ngisho nangokwengeziwe futhi enhle !!
School Umhleli Imikhuba Iwusizo
Umngane wakho Vadim Huzin.
Indlela bangithole? VKontakte Vadim Huzin Kazan Julayi 23
Ngemva amagama "ngenxa" ukhefana kuyadingeka? Ingabe ngidinga ukwaba inzuzo ukhefana nge isabizwana "ngokusebenzisa"?
Qamba Inga. Lena umsuka imfihlo
Ukuvela amazinyo, noma indlela yokuphatha caries zangenkathi nanotechnology?
Indlela ukupheka banana ikhekhe
Kungani amahlamvu ikhukhamba phuzi emaphethelweni?
Kungani igazi ekhaleni - impendulo kungase ecasha izinkinga jikelele zomzimba.